Obomi Obungelna So Isifo Ugawulayo - Christian Literature Fund
By ghydadmin	All, Christian Lifestyle, Pamphlets XHO132
Kukho isifo esibulala abantu emhlabeni jikelele. Esi sifo sibizwa ngokuba nguGawulayo (Aids). Mhlawumbi ukhe weva ngaso, okanye mhlawumbi ukhona umntu omaziyo onaso okanye othe wasweleka ngenxa yaso. Kusenokwenzeka nokuba bakho nabantwana obaziyo abashiyeke beziinkedama ngenxa yokushiywa ngabazali babo ababulelwe nguGawulayo.
Mihla le sifunda ngamanani abantu abanoGawulayo kumaphepha-ndaba, sive nakunomathotholo ngesi sifo, ukanti siyazibona neziphumo zaso ezothusayo kumabonwakude.
Kutheni le nto bebaninzi kangaka abantu ababhubhayo ngenxa kaGawulayo? Kungenxa yokuba bambalwa kakhulu abanolwazi olwaneleyo ngesi sifo, kwaye baninzi abantu abakholelwa onke amabali malunga nokuba esi sifo siqale kanjani, siwuhlasela kanjani na umzimba, nokuba ungaphiliswa kanjani na xa unaso.
Yintoni uGawulayo kunye nentsholongwane yakhe (i-HIV)?
Igama i-HIV limele i-Human Immunodeficiency Virus ngesiNgesi. Le ntsholongwane ihlasela izikhuseli-mzimba, utsho ungabi nako ukukhuseleka kwizigulo eziqhelekileyo nakwezo zosulelayo. Ezona zixhobo zibalulekileyo othi umzimba ulwe ngazo izifo ziiseli ezikhusela umzimba ezimhlophe. Intsholongwane kaGawulayo (i-HI-virus) ihlasela ezi seli zingamajoni akhusela umzimba wakho. Umzimba wakho utsho ube ethe-ethe ungakwazi ukuzikhusela kwizifo, utsho ugule kakhulu, uguliswe nasisifo esifana nomkhuhlane (flu). Kuthi kwakwenzeka oku utsho uqondwe ukuba unoGawulayo. Igama i-Aids limele i-Acquired Immune Deficiency Syndrome ngesiNgesi. Ingqokelela yeempawu zesifo esithile (syndrome) ibhekisa kwingqokelela yezifo ezibangelwa sisimo sokungakwazi komzimba ukuzikhusela kwizifo.
Abantu ingaba bosuleleka njani yintsholongwane kaGawulayo (i-HI-virus)?
Intsholongwane kaGawulayo (i-HI-virus) ihlala kulwelo lomzimba olufana negazi kunye nolunye ulwelo lomzimba olungena emntwini ngokwabelana kwabantu ngesondo. Ukuba ngaba uthe wadibana negazi lomntu onentsholongwane kaGawulayo, umntu o-HIV-positive ukutsho, kwaye unesilonda esincinane esifana nomkrwelo esikhumbeni, unganako ukuba ungosuleleka. Umntu unako nokosuselwa yile ntsholongwane ngokwabelana ngesondo kunye nomnye umntu. Kunzima kakhulu ukwazi ukuba umntu unayo okanye akanayo na le ntsholongwane kaGawulayo. Izikhuseli-mzimba ziyaqhubeka zisilwa nale ntsholongwane, ukutsho oko, umntu usengabonakala esempilweni iminyaka emininzi. Eyona ndlela ikhuselekileyo ke ngoko kukuba umntu makangabandakanyeki kwizenzo zokwabelana ngesondo ngokungakhathaliyo. Ukulala nomntu wabelane naye ngesondo ungazi ukuba uyithwele intsholongwane kaGawulayo kuyafana nokuzinika isigwebo sokufa.
Amabali angeyonyani ngoGawulayo
Maninzi amabali kunye nobuxoki obubaliswayo ngoGawulayo. Oku kwenziwa kukuba abantu abathethi ngokuphandle ngesi sifo. Abantu abaninzi bakholelwa ekubeni ukuba ngaba utya ukutya okusempilweni, usebenzise iivithamini, usele nee-antiretrovirals, uza kuphinda uphile. Asiyonyaniso ngokupheleleyo oku. Nangona ukosuleleka yintsholongwane kaGawulayo (i-HI-virus) kuthetha ukuba unesigwebo sobomi bakho bonke, ukusela ii-antiretrovirals nokuphila ngendlela esempilweni kwenza ukuba singakuhlaseli kwangoko isifo uGawulayo, kodwa soze uphile kuso. Zininzi izinto ezingeyonyaniso abakholelwa kuzo abantu ngoGawulayo. Abantu abathile bakholelwa ukuba le ntsholongwane uyifumana ngokuthakathwa, okanye ngenxa yokuba uqunjelwe zizinyanya. Abanye bakholelwa ukuba unganyangeka kwesi sisifo xa unyangwe zizangoma okanye amaxhwele, okanye xa usebenzisa amayeza esintu, okanye ngokuthi kuhlanjwe oko kuqalekiswa nezo ntshwabulo umntu akholelwa ukuba zimambethe. Bakho nabantu abakholelwa ekubeni ukulala nomntu obhinqileyo ongazange wakhe wabelana ngesondo nomnye umntu kuza kubaphilisa. Aziyonyaniso tu zonke ezi zinto.
Ungosuleleka yintsholongwane kaGawulayo (i-HI-virus) ngeendlela ezahlukileyo: umzekelo, ngokuthiwa igazi lomntu onale ntsholongwane, ngokwabelana ngesondo nomntu onayo le ntsholongwane, ngokusebenzisa inaliti yeziyobisi ebisetyenziswe ngumntu owosulelekileyo, ukanti nomama okhulelweyo onale ntsholongwane unako ukuyigqithisela kusana lwakhe olungekazalwa. Ukuba ngaba unayo le ntsholongwane, u-HIV-positive ukutsho, asinakuguqulwa esi simo, kwaye akukho mntu unako ukukunyanga kuso. Akekho amayeza aphumelelayo ukusinyanga, anexabiso eliphantsi nafikeleleka lula okanye isitofu (vaccine) esikhusela ekosulelekeni yintsholongwane kaGawulayo (i-HIV/Aids).
Yintoni ekumele ukuba ndiyenze ukuze ndithintele ukosuleleka yintsholongwane kaGawulayo (i-HI-virus)?
Ukosuleleka yintsholongwane kaGawulayo (i-HI-virus) kunako ukuthintelwa ngokuzila ukwabelana ngesondo. Eyona nto unokuyenza ikhuselekileyo kukuba uzigcine, ungabelani ngesondo namntu. Ukuthembana neqabane othandana nalo elingenayo le ntsholongwane (HIV-negative) nekudala usazana nalo yeyona ndlela inokukukhusela. Ukuba ngaba awunako ukukwenza oku, eyona ndlela ifanelekileyo nekhuselekileyo yokuthintela ukosuleleka kukusetyenziswa ngendlela efanelekileyo kwekhondom. Kumazwe amaninzi le nkqubo yothintelo ibizwa ngesiNgesi ngokuba yi-ABCD-prevention process, apho oonobumba bamele oku:
A = Abstinence (ukuzila ukwabelana ngesondo)
B = Be Faithful (ukuthembeka)
C = Condoms (iikhondom)
D = Death / Disease Control (ukufa / ulawulo lwesifo)
Ukuba ngaba uyala ukukuzila ukwabelana ngesondo, ukuba ngaba awukwazi ukuhlala uthembekile kwiqabane lakho owabelana nalo ngesondo, ukuba ngaba uyala ukusebenzisa ikhondom, kumele ukuba uzilungiselele ukujongana nenyaniso ebuhlungu.
“Inyama enyameni ikhokelela kuthuthu eluthuthwini.”
Ingaba ithini yona iBhayibhile?
IBhayibhile iza nesona sicwangciso sisesona silungileyo. KwiNcwadi kwabaseRoma, isahluko se-12, uThixo uyakumema ukuba unikele ngobomi bakho bonke kuye. Uza kukwenza ukuba uqiqe ngokutsha, ukuze ube nako ukwazi ukuba yintoni na ayilindele kuwe uThixo. Wakuba ukuqonda ukuba ukwenzele ntoni uThixo, awuzukwazi ukwenza enye into koko uza kumkhonza ubomi bakhe bonke. UThixo ukuthanda kakhulu, kwaye unesicwangciso ngobomi bakho. Ngenxa yokuba uThixo ekuthanda kangaka, nawe unako ukuba ungazithanda. Zihloniphe uwuhloniphe kananjalo nomzimba wakho. Unelungelo lokungavumi ukwabelana ngesondo nomntu ngaphandle komtshato. Ukuthembeka yindlela uThixo enza ngayo ukuba ukhuseleke kuGawulayo (i-HIV/Aids). Njengomntu omtsha okanye ongatshatanga, umele ukuba uyayazi into yokuba umzimba wakho ngowakho kunye noThixo. Akukho mntu unelungelo lokukunyanzela ukuba wabelane ngesondo naye. Ukuba ngaba umntu uthi: “Ukuba ngaba uyandithanda, uza kulala nam,” ungamphendula uthi: “Ukuba ngaba uyandithanda, uza kundihlonipha, kwaye uzihloniphe nezimvo zam.”
Yintoni ekufuneka ndiyenze ukuzikhusela kule ntsholongwane kunye nesi sifo sibulalayo?
Linda ungabelani ngesondo namntu de ube utshatile. Khumbula ukuba ngumzimba wakho nobomi bakho. Nguwe kuphela onokuzikhusela.
Wuhloniphe umtshato ngokuthi uhlale uthembekile kwiqabane lakho.
Sebenzisa ikhondom xa usabelana ngesondo nomntu.
Qonda ukuba ingaba unayo okanye akunayo na intsholongwane kaGawulayo. Yiya uhlolwe ukuba ngaba awuqinisekanga.
Thetha ngesifo uGawulayo (i-HIV/Aids) ekhayeni lakho, esikolweni, nasecaweni.
Khumbula: Ukhethekile kuThixo. Musa ukusibeka engozini isicwangciso sikaThixo nenjongo anayo ngobomi bakho ngokuthi uphile ubomi bakho ngendlela engenankathalo.
Die aarde se klimaat het met tyd gedurig verander. Klimaatsverandering, soos ons dit tans ervaar, is egter hoofsaaklik as... read more
Oud – en oraloor geliefd Die Heidelbergse Kategismus (1563) is reeds 450 jaar oud. En tog is dié dokument vir... read more